गृह स्रोत-साधन उपयोगी जानकारी दूर शिक्षा र तालिम माध्यमिक विद्यालय
NCED ले दूर पद्धतिका माध्यमबाट संस्थाको वेबसाइट मार्फत अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराएर एस.एल.सी. तहका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
भारतको NIOS बोर्डमार्फत Kantipur International Open Education नामक संस्थाले नेपालमा खुला विद्यालयको शुभारम्भ गरेको हो। भारतको मानव संशाधन विकास मन्त्रालयले सन् १९८९ मा एउटा स्वायत्त संस्थाका रूपमा NIOS स्थापना गरेको थियो । पढ्ने इच्छा भए पनि विद्यालय/महाविद्यालय जाने अवसर नपाएका मानिसहरूलाई यस संस्थाले लक्षित गरेको छ।
के कस्ता पाठ्यक्रम छन्?
उच्च माध्यमित तहको पाठ्यक्रम
NIOS पाठ्यक्रमका लागि पूर्वयोग्यताको मापदण्ड के हो?
क) माध्यमिक तहका लागि
८ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी
१४ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थी
ख) उच्च माध्यमिक तहका लागि
एस.एल.सी. वा सो सरहको तह उत्तीर्ण विद्थार्थी
१५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका विद्यार्थी
नेपाल सरकारबाट लिइने प्राइभेट परीक्षा
प्राइभेट परीक्षा नेपाल सरकारका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लिने परीक्षा हो। पढ्न चाहने तर विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीहरूका लागि यस्तो परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो।